जन्डिस भनेको के हो ? जन्डिस कसरी शुरु हुन्छ ? - Himalay Online Media
हिमालय अनलाइन मिडिया।
आँखाको सेतो भाग, हत्केला, अनुहार वा सम्पूर्ण शरीरमा पंहेलो रंग देखिएको अवस्थालाई जन्डिस भनिन्छ। जन्डिस आँफैमा रोग होइन। यो ५० भन्दा धेरै रोगको साझा लक्षण मात्र हो। जसरी “ज्वरो” आँफैमा रोग होइन, हजारौं रोगहरुको साक्षा लक्षण हो त्यसरी नै जन्डिस पनि शरीर भित्र हुने धेरै साधारण र असाधारण रोगहरुले बाहिर देखाउने एउटा लक्षण मात्र हो। जन्डिसको कहिल्यै पनि उपचार गरिदैन। बरु जुन कारणले जन्डिसको लक्षण देखाउंछ सोहि कारक तत्वको उपचार गरिन्छ।
जन्डिसको लक्षण देखिने बित्तिकै डाक्टरकोमा गएर के कारणले गर्दा जन्डिस भएको हो त्यो पत्ता लगाउन पर्छ। तपाईंको डाक्टरले पहिला पिसाब र रगत जांच गर्छन्। अलि जटिल खाले रोगको शंका लागेमा वा रगत र पिसाबबाट सम्पूर्ण जानकारी मिल्न सकेन भने Ultra Sound, CT scan, MRI, ERCP आदि बाट शरीर भित्र के भैराखेको छ, कुन कारणले यस्तो भयो भनेर खोजीनिती गर्छन्।
अधिकांश case हरुमा (फेरी दोहोर्याउन चाँहे, अधिकांश समयमा) जन्डिस सामान्य रोगहरु/अवस्थाहरुबाट हुने गर्छन् र ३ हप्ताको आसपासमा आँफै सन्चो हुन्छ। यस्तो बेलामा डाक्टरले औषधि दिइहाले भने पनि शरीर चिलाउन नदिने, बान्ता हुन नदिने औषधि, Vitamins हरु आदि वा कहिले काहीं केहि समयको लागि bile बन्ने प्रक्रिया मत्थर गर्ने/bile stone बन्न नदिने औषधि आदि दिन्छन्।
गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई मासिक ५ हजार दिने देउवा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुने दिशामा
धर्मशास्त्र अनुसार मानिसमा हुनुपर्ने ३२ लक्षणहरु !!!